Izinduna zimashela amaholo nezinsiza-kusebenza | News24
LAST UPDATED: 2018-04-26, 06:25
Izinduna zimashela amaholo nezinsiza-kusebenza
PHOTO: wHATSAPP Usihlalo wezinduna esindazweni uMgungundlovu, uMduduzi Mthethwa.
IZINDUNA zemikhandlu yamakhosi KwaZulu-Natal zivivela ukumasha edolobheni ngoLwesibili oluzayo emkhankasweni wazo wokuphoqa uhulumeni wesifundazwe aziholele nokuthi zithole izinsiza-kusebenza.
Usihlalo wezinduna esifundeni uMgungundlovu futhi oyinduna yakwaNyavu, uMduduzi Mthethwa, utshele i-Echo ukuthi okungenani izinduna ezibalelwa ku-1 200 zizokhombisa ukunengeka kwazo, ngokuhudula izinyawo kukahulumeni ngalezi zindaba nezinye, ngokuthi zimashe.
“Imashi yethu izosukela eDales Park ngo-9 ekuseni bese siya eMnyangweni wezobuHoli beNdabuko lapho sizonikezela khona ngencwadi yethu yezikhalo,” kusho uMthethwa.
Uthe sebelulwe lolu daba kusuka ngo-2013 emva kokuba uMengameli Jacob Zuma esayinde isigunyazo sokubonelelwa kwezinduba kodwa kuze kube imanje azikaholelwa izinduna. “Lokhu kusho ukuthi izinduba zikweletwa imiholo ka-2013, 2014 no-2015. Akukho neyodwa induna eholelwayo lapha KwaZulu-Natal kodwa ziyaholelwa kwezinye izifundazwe.
Uthe okunye abakudingayo beyizinduna izinsiza-kusebenza. “Uthola ukuthi imikhandlu inamakhompuyutha kodwa awekho amaphepha okuwasebenzisa kanti futhi awanakekelwa aze agcine esehlupha. Kanti futhi sifuna omabhalane bemikhandlu baqashwe uhulumeni ngokugcwele njengoba kwenzeka kwezinye izifundazwe. Hhayi lokhu kokuthi imikhandlu ayizikhokhele yona laba basebenzi,”
UMthethwa imikhandlu ayinamali ngoba ayikho imali oyiqoqa kwizakhamizi. Uveze ukuthi uma bebuza umnyango ngokungaholelwa kwabo, uthi awanayo imali njengoba lesi sifundazwe sinezinduna eziningi ngaphezu kwezinye.
“Thina sithi phela uma isifundazwe sinabantu abaningi kunezinye, sizokuba nezinduna eziningi,” kusho yena.
Uphinde waveza ukunengeka kwabo beyizinduna emva kokuba bebizelwe emhlanganweni ka-6 June obekuthiwe uNgqongqoshe wokuBusa ngokuBambisana nobuHoli beNdabuko KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube, uzokhuluma nabo kuwo kodwa akangafika.
Uthe nalapho bebezitshela ukuthi babeyotshelwa ukuthi bayithola nini imali yabo kodwa okunalokho batshelwa ukuthi imali yokubaholela yiyo engekho.
“Iminyaka emithathu balukho besitshela ukuthi basafuna imali yokusiholela, ”kusho uMthethwa.
Okhulumela umnyango uLennox Mabaso uqala akangafuna ukukhuluma okudlula ukuthi sebezitshelile konke okufanele bazitshele khona izinduna. Kodwa ubuye wathi imali abayikweleta izinduna nje iyodwa ilinganiselwa ku-R400 million.
“Asinayo leyo mali. Iqiniso wukuthi ziningi kakhulu izinduna KwaZulu-Natal,” usho kanje, wagcizelela ukuthi hhayi ngoba bengafuni ukukhokha kodwa imali engekho njengoba beselinde umphumela wesicela sabo sale eMnyangweni weziMali kuzwelonke.
“Ithina esaba yisifundazwe sokuqala eNingizimu Afrika ukhokhela izinduna engakaMemezeli ngisho ukumemezela umengameli ukuthi ziholelwe
Rohde trial continues, 'bathroom hook' evidence expected
Edgemead 06:27 AM
Road name: Edgemead Drive
Chapmans Peak 06:26 AM